बिरामीलाई किन राखिन्छ आईसीयूमा? कतिबेला निकालिन्छ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । आईसीयूको पूरा नाम इन्टेन्सिभ केयर युनिट अर्थात् सघन उपचार कक्ष हो, यस वार्डमा गम्भीर खालका बिरामीलाई राखिन्छ । यससँग सम्बन्धित विज्ञानलाई क्रिटिकल केयर मेडिसिन भनिन्छ। रक्तचाप कम भएर औषधि प्रयोग गनुपर्ने, मुटुको रोगी, निमोनिया भएर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्थालगायत सिकिस्त बिरामीलाई आइसियूमा राख्ने गरिन्छ । नियमित रूपमा चिकित्सकको निगरानीमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई आइसियूको आवश्यकता पर्छ ।
नौबिसे–नागढुंगासहित ७ ठाउँमा सुरुङमार्ग
काठमाडाैँ । सरकारले मुलुकका विभिन्न सात स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त […]
कांग्रेसको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु
माघ १८। काठमाडौँ, नेपाली काँग्रेसको नीति तथा कार्यक्रम समितिमा पार्टीको आगामी नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा […]
मन्त्रीपरिषद बैठकः स्थानीय तहको सङ्ख्या सातसय चवालीस कायम
काठमाडौँ, २२ फागुन । सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या सातसय ४४ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को […]
नेपाली कामदारलाई उचित सेवासुबिधा दिन्छ कतारी राजदुतः हमर
असार १७, काठमाडौं । नेपाली कामदारलाई कतारले उचित सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ […]